WAREYSI GAAR AH:
Su’aal iyo jawaab laga soo qaatay waraysi gaar ah ee lala yeeshay RW-hore Mudane Abdi Farah Shirdon (Saacid) horaantii sanadkii 2014.
Su’aal: Maxaa ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee dawladdii aad garwadeenka ka ahayd soo hoysay, oo ay taariikhdu kugu xusi kartaa?
Jawaab: Waxaa waqtigii xukuumaddii an garwadeenka ka ahaa lagu xusuusan karaa dhacdooyin la xiriira taariikh ugub ah, waxqabad, dhaqan suuban ee dawladeed iyo duug hara, sida:
U bareeriddi inaan xaqiiqdeena ku tashano oo dhisno xukuumaddii ugu koobneyd,oo tayo leh uguna miisaaneyd ee Somalia- kana koobneyd 10(toban) Wasiir oo qura.
Dhaqan tirkii habka 4.5 ee calaamadda u ahaa inaan beelaha Soomaaliyeed xukunka u sinneyn. Maanta, awood qeybsiga dhanka xukuumadda, wax nus ahi ma jiraan oo beesha 5aad waxay la mid tahay beelaha kale.
Ka qeybgelinta dumarka talada iyo siyaasadda dalka oo gaartay meeshii u sarreysay taariikhdeena oo ah 20% tirada golaha iyo jagada RW ku-xigeenimo.
Kala soocidda hawlaha kala duwan ee dawladda- sida xukuumadda iyo tan golaha sharci-dejinta, si loo horumariyo mabda’a isla xisaabtaanka. Wasiirka Caddaaladda oo qura baa ka ahaa golaha asalkaa (10) ee xukuumaddaydii xubin Golaha Shacabka.
Waxaan dhisay qaab ahaan dawlad wadaag ah oo loo dhan yahay. Taasoo ah dawladda ugu habboon ee maanta na anfici karta. Waxaan laal-lay fekreddii ahayd ma i dhistay/ codeysay mise waad iga safatay/codeysay. Wasiiro ka tirsan axsaab kala duwan iyo kuwo an isku murashax Madaxweyne aheyn baa golaha ku wada jirey oo si hufan u soo wada shaqeeyey.
Xasillinta iyo isu-furidda magaalo madaxda Xamar oo kala qoqobneyd ayna tiilay in ka badan 60(lixdan) jid-gooyo/ isbaaro oo si sharci darro ah ay uga soo xarooto lacag dhan US$1million bishiiba.
Qaadistii cuna-qabateyntii hubka ee saarneyd Somalia in ka badan muddo 20(labaatan) sano ah.
Tiiro-koobkii, qalabeyntii iyo mushar bixin joogtaa ee ciidamadda qalabka sida. Iyo xoreyntii deegaano kala duwan-sida; Balcad, Merka, Baydhabo iyo degaanada u dexeeya.
Qarameynta qorshaha xasillinta dalka (stabilization plan) oo micnaheedu ahaa xasillinta dhulalka gacanta dawladda soo gala iyo fududeynta maamul dhiska dalka ha loo daayo DFS.
Safaradii baahsanaa ee maamulada, goballada iyo magalooyinka dalka: Puntland, Galmudug, Ximan iyo Xeeb, Dhuusa-Mareeb, Caabud-Waaq, Beledweyne, Jowhar, Balcad, Afgooye, Merka, Baydhabo, Garbahaarey ,Kismaayo iyo meelo kale. Booqashooyinka baaxadaas lahaa, waa markii u horeysay oo lagu dhaqaaqay ilaa burburkii . Ujeedaduna waxay ahayd in dadka la dhageeysto lana taabsiiyo in dowladnimadu tahay wax ay leeyihin oo loogu adeegayo.
Dadaaladii loo galay xaqiijinta midnimo iyo dib-u-heshusiin shaqaysa ee tallo ku timid,sida; shirka Istanbul, Addis-Ababa, iyo heshiisyada xukuumadda iyo Ahlu-Sunna ee Caabud-Waaq iyo Garbahaarey.
Bilowgii mashruuca “Aada Dugsiyada” oo loo qorsheeyey in ka badan hal milyan oo arday ahi in ay helaan waxbarasho lacag la’aan ah. Iyo, dib-u-nooleynta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed(JUS).
Qorsheynta iyo hirgelinta Barnaamijka Daryeelka Caafimaadka Aasaasigaa (Essential Package of Health Services) ee gobollada dalka. Waa qorshe caafimaad ee waxtar ah lana awoodo baahintiisa.
Fekredda iyo bilowga abaabulka qorshe ballaaran oo ah in biyo nadiif ah la wada gaarsiiyo bulshada ayadoon loo eegayn siyaasad. Qeybtii 1aad ee ka koobneyd 160(boqol iyo lixdan) ceelal dhaadheer ah (dhamaan Somalia) ayaan la saxiixanay Bangiga Islaamka (Jidda, Saudi Arabia). Qorshe kale ee sii ambaqaadaya isla hiigsiga yoolkan, waxaan la bilownay Ururka Wadamada Islaamka (OIC).
Adegga Boostada: Dib-u-soo-celintii xubinimadeenii buuxday ee Adeegga Boostada Caalamigaa (Universal Postal Service-UPS) oo aynu ka maqneyn muddo 20 sano ka badan. Hammigu wuxuu ahaa in adeeggu wada gaaro Somalia: magaalo iyo tuulaba.
Qabashadii shirweynihii siyaasadda, amniga, waxbarashada iyo caafimaadka- si siyaasadda dalka loogu jaangooyo tallada dadka.
Heshiiskii dib-u-soo-celinta maamulka hawada Somalia(Air Space) iyo dakhligii laga helayba muddo 20 sano ka badan.
Kororka iyo tayeynta maamulka iyo shuruucda maaliyadda dalka. Dakhliga bil-laha ah wuxuu kordhay US$2.5 ilaa US$12 million intii u dhexeysay October 2012- September 2013. Dhanka kale, waxaa dib u soo laabtay kalsoonidii iyo wada-shaqeyntii hey’adaha maaliyada (IMF,WB,ADB) ee caalamigaa iyo Somalia.
Korista dhaqaalaha, shaqo abuurka, maalgashiga, iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadahaba.
Dib-u-howl-gelinta hay’adahan dawligaa ee soo socda, oo si buuxda howl-gab u ahaa ilaa horraantii 1991:
Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed (JUS)
Hay’adda Qoxootiga Qaranka iyo Bara-kacayaasha
Bangiga Horumarinta Soomaaliyeed (BHS) iyo
In ka badan 25 hindise sharciyeed iyo heshisiiyo caalami ah baa xukuumaddu u gudbisay Barlamaanka. Tani waa maqaam sare ee ayan gaarsiisneyn wadamada xaaladaha caadiga ah ku jira qaarkood, kana tarjumaysa hammiga ah sarreynta iyo ku dhaqanka sharciga.
Diyaarinta fekredda iyo document-ka Hiigsiga Cusub( New Deal Compact ) ee wadajir Somalia iyo caalamku isula ogalaadeen shirkii Brussels ee September 16, 2013, halkaasoo lagu yaboohay maaliyad dhan US$2.4 billion, kaddib markii lagu qancay dadaalka iyo horumarka ay dowladdu sameysay.
Aqoonsigii USA, UK iyo wadamo kale ee reer galbeed ah, iyo in ka badan 16 dal ee daafaha caalamka ee si rasmi ah ugu soo magacawday danajirayaal Somalia.
Haddaan soo gaabsho, wax qabadkaas dhaxal galkaa iyo kuwo kale oo anan halkan ku soo wada koobi karin waxay ku suurtagaleen wada-shaqeyntii fiicnayd iyo mas’uuliyad wadareedkii naga dhexeeyey anniga iyo golahayga wasiirada iiyo madaxdii kale ee dalka oo an dhamaantood uga mahadnaqayo sidii habbooneyd oon u wada gudanay mas’uuliyaddii qaranka.